Deadshot - ဝီကီပီးဒီးယား
Deadshot (နာမည်ရင်း Floyd Lawton) သည် DC Comics မှထုတ်ဝေသော အမေရိကန် ကာတွန်း စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ လင်းနို့လူသားရဲ၏ ရန်သူအဖြစ် လူသိများသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏ အဓိကဇာတ်ဆောင်စရိုက်မှာ လူဆိုး လူကြမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စူပါလူစွမ်းကောင်း ဆန့်ကျင်သူဇာတ်ရုပ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Deadshot ကို လင်းနို့လူသား အတွဲ ၅၉( ဇွန်/ဇူလိုင် ၁၉၅၀) တွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့ကာ Bob Kane, David Vern Reed နှင့် Lew Schwartz တို့က ဖန်တီးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး မျက်နှာဖုံးလူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ဖန်တီးထားဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Deadshot သည် Suicide Squad နှင့် Secret Six တို့ရဲ့ အဓိကအရေးပါသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
IGN ကသတ်မှတ်သော the Top 100 Comic Book Villains of All Time တွင် Deadshot သည် နံပါတ် ၄၃ နေရာတွင် ရှိသည်။ Suicide Squad ဇာတ်ကားတွင် Deadshot အဖြစ် မင်းသားကြီး Will Smith က သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
၁ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ
၁.၁ ငယ်ဘဝ အကြောင်း
စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ[ပြင်ဆင်ရန်]
DC ကဖန်တီးထားသော လောကထဲတွင် Deadshot သည် ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူ့ကို "never miss" ဟု တင်စားကြသည်။ သူ၏ အဓိကစွမ်းရည်တစ်ခုမှာ လက်နက်အမျိုးအစားအစုံကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သူ့လက်ကောက်ဝတ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အသံတိတ် လက်နက်ကိုသာ အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ သူ့ကို Gotham City တွင် အတိုက်အခိုက် ကျွမ်းကျင်သော ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်သော်လည်း the Dark Knight ကို အစားထိုးရန် ကြိုးစားလာသောကြောင့် လင်းနို့လူသား၏ အဓိက ရန်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Deadshot သည် Batman နှင့် ရဲမင်းကြီး Gordon မှ Gotham ၏ မြေအောက် ဒုစရိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခံရပြီးနောက်မှ ထောင်ကျခဲ့သည်။ သူ၏တပည့်များနှင့် သူ့အဖွဲ့များက သူ့ကို ပြန်လည်ကယ်ထုတ်ပြီးနောက်တွင် Deadshot သည် ပိုမိုကြမ်းတမ်းလာသည်။ ကြေးစားလူသတ်သမားအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုလိုက်ပေးသည်။ အဝတ်အစားလဲ ပြောင်းလိုက်သည်။ သူ၏ ဦးထုပ်ရှည်ကြီးအစား အနီရောင်ဝတ်စုံ၊ သတ္တုမျက်နှာဖုံးနှင့် ညာဘက်မျက်လုံးတွင် ပစ်မှတ်ရှာပေးသော မှန်ဘီလူးတို့ကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်လာခဲ့သည်။
Deadshot ဘဝဇာတ်ကြောင်းမှာ အစီအစဉ်တကျ ဖော်ပြခြင်း မခံခဲ့ရပါ။ နာမည်အရင်းမှာ Floyd Lawton ဖြစ်ပြီး သူမိခင်၊ ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းသောဖခင်၊ ချစ်ခင်ရသော ညီတစ်ယောက်တို့နှင့် အတူ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အမှတ်မထင်သော အချိန်တစ်ခုတွင် Lawton တို့ ဖခင်သည် သူ့ညီလေးကို နှိပ်စက်နေစဉ် ငယ်ရွယ်ဖျက်လတ်သော Deadshot ပေါက်စလေးက သူ့ဖခင်၏ ဆိုးဝါးတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမှုမှ လွတ်မြောက်ရန် သူ၏ သေနတ်ကို အသုံးပြုလိုက်သည်။ သို့သော် သူထိုင်နေသော သစ်ပင်ကိုင်းက ကျိုးကျပြီး ကျည်ဆံသည် သူ့ညီကိုသာ ထိမှန်ပြီး သတ်လိုက်မိသွားသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်က သူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကို ကြီးမားစွာ စိုးမိုးထားပြီး သူ့ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်စေနိုင်သလို သူ့ဘဝကိုလဲ သူအလေးမထားတော့ပေ။ ဤသည်မှာ လင်းနို့လူသားကို သတ်ပစ်ရန်လုပ်တိုင်း သူ့ကို တားဆီးနိုင်သော စိတ်ဒါဏ်ရာလဲ ဖြစ်သည်။
Deadshot မှာ ထူးခြားတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေလို စွမ်းရည်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ DC ဖန်းတီးထားတဲ့ လောကတည်းက ထိပ်တန်းမျက်နှာဖုံးလူသားတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူဟာ ထူးခြားတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတွေလိုပဲ တိကျသေချာသည်။ သူကို "never miss" လို့တင်စားကြတဲ့အတိုင်း သူဟာ သူ့ပစ်မှတ်ကို ဘယ်တော့မှ အလွတ်မပေးပါဘူး။ သူ တစ်ခါပဲလွဲဖူးပါတယ်။ လင်းနို့လူသားကို ပစ်သတ်ဖို့ သူလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ သူ Captain Boomerange ရဲ့ ခေါင်းပေါ်က ပန်းသီးကို မျက်စိပိတ်ပြီး ထိအောင်လည်းပစ်ပြဖူးပါတယ်။ Deadshot က လက်ရုန်းချင်ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှူမှာလဲ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ လင်နို့လူသားတို့ Joker တို့လို့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ တွေနဲ့တောင် အပြိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ Deadshot က လက်နက်မျိုးဆုံကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့လက်စွဲတော် စနိုက်ပါ ရိုက်ဖယ်နဲ့ သူ့လက်မောင်းမှာ တတ်ထားပြီးတဲ့ စက်သေနတ်တို့ကို အသုံးများပါတယ်။ Deadshot က ရုရှားဘာသာစကားလဲပြောတတ်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။
↑ Wallace, Dan (2008). The DC Comics Encyclopedia. Dorling Kindersley, 97. ISBN 0-7566-4119-5. OCLC 213309017။
↑ Deadshot is Number 43။ ign.com။ 2015-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Deadshot&oldid=419604" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။